people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २५ गते शुक्रबार,तदानुसार इश्वी सन २०१७ अप्रिल ७ तारीख – कामदा एकादशी ब्रत आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २५ गते शुक्रबार,तदानुसार इश्वी सन २०१७ अप्रिल ७ तारीख – कामदा एकादशी ब्रत – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २५ गते शुक्रबार,तदानुसार इश्वी सन २०१७ अप्रिल ७ तारीख – कामदा एकादशी ब्रत
Posted on April 7, 2017 April 7, 2017 by Durga Panta
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७३ साल चैत्र २५ गते शुक्रबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ अप्रिल ७ तारीख, कामदा एकादशी ब्रत, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथी १०स्४० बजे सम्म चन्द्रमा सिहं राशिमा सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे र धनकुटा खबर)
कार्य क्षेत्रमा मन लागेपनि सामान्य क्रुटि ले मानशिक चिन्ता दिलाउने छ । प्रतिश्पर्दा मा उत्त्रदा होस पुर्याउनु होला । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले उठाउन सक्नेछन । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
पारीबारीक झोर झमेला सताउन सक्नेछ । पठनपाठनको क्षेत्रमा त्यति राम्रो समय रहेको छैन । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ । मातृ पक्षको सहयोले बौधिक बिकासमा जुट्ने समय रहेको छ । स्वास्थमा सामान्य बाधा आई पर्ने छ ।
पारीवारिक मनोरञ्जन का क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । सामान्य यात्रा पश्चात कार्य सिद्यि हुनसक्ला । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला । सहयोगी हातहरुको बृद्यि हुने योग रहेको छ । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्नेछ ।
स्बास्थ सम्बन्धि समस्यामा सुधार आउनेछ । मित्रजनको साथ सहयोले आक्स्मिक धनलाभ हुन सक्नेछ । सामान्य यात्रा हुन सक्ला । प्रियमित्रहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको कार्यको चर्चा छाउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मन प्रशन्न रहनेछ । खानपानको योग रहेको छ । चिसोको कारण स्बास्थ सम्बन्धिसमस्याले सताउन सक्नेछ । हराएका धनमाल प्राप्ति योग रहेको छ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । संगित तर्फ रुचिजाग्नेछ ।
साधारण खर्च भएतापनि दिन मध्यम रहनेछ । एकान्त प्रिय हुने योग रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा राम्रो समय रहेको छ । पारीबारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ ।
धनमालमा सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ सजग रहनु होला । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने योग रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब आउन सक्नेछ । सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेको छ । शुभचिन्तकहरुको सङ्ख्या मा बृद्यि हुने छ । गाएन क्षेत्रमा रुचि जाग्ने योग रहेको छ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ ।
कार्य क्षेत्रको सामान्य झन्झट पश्चात सभा सम्मेलनमा सम्लग्न भईनेछ । मान्य जनहरुको साथ सहयोग प्रशस्त प्राप्त हुनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुनेछ ।
कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला सामान्य अप्जस प्राप्त हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा धेरै समय ब्यतित हुन सब्छ । दाजु भाई बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्नेछ ।
अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आटँ शाहसमा कमि आउनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट आउन सक्नेछ । धनमालमा क्षति पुग्न सक्छ ।
दाम्पत्य शुखमा कमि आउन सक्छ । ब्यापार ब्यवसायमा भने दिन मध्यम रहनेछ । कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहला । कार्य क्षेत्रमा सोचे अनुरुप समय दिन सकिने छैन । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । बोल्दा होश पुर्याउनु होला ।